INDEPENDENT: Maraykanka Maslaxad Uguma Jirto Howlgalka Uu Ka Wado Soomaaliya. – Calamada.com
INDEPENDENT: Maraykanka Maslaxad Uguma Jirto Howlgalka Uu Ka Wado Soomaaliya.
calamada July 17, 2019 3 min read
Warbixin cusub oo uu baahiyay wargeyska Independent ee kasoo baxa wadanka Ingiriiska ayaa looga hadlay dagaalka uu Maraykanku kaga jiro wadanka Soomaaliya, iyo sida uu Maraykanku uga been sheegay xaqiiqda rasmiga ah ee halkan ka jirta.
Qoraaga warbixinta wuxuu sheegayaa in Maraykanka inkabadan toban sano uu si toos ah ugu lug leeyahay dagaalka ka socda Soomaaliya, wax la rumeysan karana aaney ahayn in howlgallada ay ciidamadiisu fulinayaan ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen labo qof oo keliya.
“ keliya labo qof oo shacab ah ayaa ku dhintay ama ku dhaawacmey duqeymaha xoogan ee uu Maraykanku ka wado Soomaaliya, sidaas waxaa sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Africa magaciisana loo soo gaabiyo AFRICOM, balse ma runbaa? Anigu waan ka shakisanahay” waxaa sidaas yiri qoraaga warbixinta lagu daabacay wargeyska The Independent.
Wuxuu intaa sii raaciyay “ Maraykanku wuxuu howlgalkiisa Soomaaliya wadaa inkabadan 10 sano, cadeymo dhawaan uu baahiyay website-ka The Intercept-na waxaa lagu ogaaday in ciidamada Maraykanku qaadeen howlgallo dhowr ah oo ay wax ku noqdeen dad badan oo shacab ah”.
Qoraaga warbixinta wuxuu sheegayaa in Maraykanku aanu marmarsiyo u heleynin duqeymaha dadka shacabka ah ay ku dhimanayaan ee uu ka geysanayo Soomaaliya, mana jirto sababo lagu qanci karo oo caadi ka dhigaya faragelinta Maraykanka ee wadankan.
“Inkastoo marar badan su’aallo la iska waydiiyay tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay duqeymaha Maraykanka, hadana waxaa mudan in la is waydiiyo, ahdaafta ay hiigsaneyso xamalada ay dowladda Maraykanku ka wado wadanka Soomaaliya?” sidaas waxaa leh qoraaga maqaalka.
Warbixintu waxay dib u milicsaneysaa taariikhda faragelinnadii uu Maraykanku ku sameeyay wadanka Soomaaliya, gaar ahaan wixii ka dambeeyay weerarkii 11 septembar, kolkaas oo Aqalka Cad uu fadhiyay Jorje W Push.
“Maraykanku wuxuu taageerayay dagaal oogayaashii ay shacabka Soomaalidu neceen ee ku sugnaa Muqdisho, kuwaas oo maxaakimtii Islaamigu xoog uga saareen caasimadda, markaas kadibna wuxuu gacan iyo gargaarba siiyay ciidamadii Itoobiya ee duulaanka ku qabsaday koonfurta Soomaaliya”.
Qoraaga warbixintan oo lagu magacaabo Ferrod Laber, kuna sugan magaalada Newyork ee Maraykanka, wuxuu sheegayaa inaaney waxba soo kordhin duqeymaha aan loo meel dayin ee diyaaradaha Maraykanku ka geysanayaan Soomaaliya.
Wuxuu sheegay, iskaba daaye iney wax soo kordhiyaan duqeymahaas, in Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoojisay weerarada, dagaalyahannadeeduna ay qaadeen weeraro aargudasho ah.
“ Weerarada Maraykanku geysanayo kama baxsana iney yihiin olole milliteri oo awood muujin ah, waxaa loo dabaal degaa tiro Jihaadiyiin ah oo duqeymahaas ku dhinta, iyadoo aan la dejin qorshayaal looga hortagi karo waxa ku dhiiragelinaya Al-Shabaab iney weeraro qaadaan, bil caksi, duqeymuhu waxayba ka qeyb qaateen iney kordhaan weerarada ay soo qaadayso Xarakada Al-Shabaab” ayuu yiri Ferrod Labor oo ah qoraa ka faallooda arimaha milliteriga.
Warbixintu waxay meesha ka saareysaa suurtagalnimada in awood lagu maquuniyo, loogana guuleysto Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, maadama ay ku xidideysteen gudaha dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, wuxuu qoraaga Warbixintu soo jeedinayaa talo ku socota dowladda Maraykanka, taas oo ah In si deg deg ah u joojiso faragelinta iyo howlgallada milliteri ee ay ka wado wadanka Soomaaliya.
“ Annagoo wax ku dhisaneyna asbaabaha aan soo sheegnay, waxaa Maraykanka waajib ku ah inuu soo afjaro oo uu joojiyo howlgalka uu ka wado Soomaaliya, maadama aanu ka heleynin wax faa’iido ah, maslaxad iyo danina aan ugu jirin” ayaa lagu soo khatimay maqaalka lagu daabacay wargeyska Independent ee laga leeyahay dalka Ingiriiska.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-14-11-1440 Hijri
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 14-11-1440-Hijri.